Banyere Banking Banking - Olee otú ị mepee akaụntụ kacha mma maka gị
Azụmahịa Banyere Ntanetị | Otu esi mepee Akaụntụ kacha mma
Banyere akụ na ụba gụnyere imepe ụlọ akụ na-abụghị ná mba ahụ ebe mmadụ bi. Ndị mmadụ na-emeghe akaụntụ ndị a maka ọtụtụ ebumnuche. Nke a gụnyere ichebe akụ ha site na ikpe, ndị e ji ụgwọ na ikpe, yana ịchekwa ụtụ isi na mgbasawanye azụmahịa. Anyị na-emelite edemede a n'esepụghị aka. Ebumnuche anyị bụ inye gị ntuziaka kachasị mma iji kwurịta otu esi eme, ebe aga-eme na ihe kpatara mepee otu ụlọ akụ akụ. Anyị na-atụle iwu, nkọwa na ihe ọ pụtara. Anyị ga-enyocha ihe ndị bụ isi gbasara ozi dị elu na akwụkwọ online n'efu will ga-ahụ n’okpuru.
Lọ akụ akụ na Western ụwa dị njọ. Ọ bụ eziokwu. Nke a bụ ihe Ego zuru ụwa ọnụ na-ekwu, dịka edere a, nke ụlọ akụ kachasị mma nke 30 n'ụwa. Ọ dịghị onye nọ na United States. Zero. Nke dị elu nke 50, naanị ise ụlọ ọrụ ego dị na US. Ọzọkwa, anọ nke ụlọ akụ US ise dị na ndepụta bụ naanị obere ụlọ akụ na-akọ ugbo mpaghara. Enwere akara AAA isii anoghi anoghi ahia. N'ime isii, ọ dịghị onye nọ na US.
Banlọ akụ sholọ Mpụga: Usoro Ntụziaka.
USA: Ọdịda miri emi
Chee echiche. USA bụ mba ji ụgwọ ụgwọ n'ụwa niile. Ọ dịghị mba ọzọ na-abịaru nso. N'ime mba anọ nwere ụgwọ ụgwọ mba kachasị ukwuu, US nwere ụgwọ nke ọnụ ọgụgụ UK ugboro abụọ na ihe dị ka okpukpu atọ na ọkara karịa ọnụọgụ atọ na France na Germany anọ.
Yabụ, nkwupụta mmalite a abụghị isi okwu na-adọrọ uche. Ọ bụ eziokwu dị ọcha dabere na ihe akaebe siri ike. Ọzọkwa, n'oge na-adịghị anya United States jiri ọkwa nguzo aka nke Standard & dara ogbenye, ụlọ ọrụ gọọmentị na-ahụ maka nkwanye ùgwù kacha elu n'ụwa. Ndị US enweghị iwu na obodo ha nke machibidoro ụlọ akụ na-ebubata n'ụsọ. Yabụ, ibido ma ọ bụ maka ozi ndị ọzọ, nweere onwe gị iji mpempe akwụkwọ ma ọ bụ kpọọ nọmba ndị dị na peeji a. Ka ọ dịgodị, biko lee ntuziaka dị n'okpuru.
New ka ederede mba? Ichoro ime ka nghota gi? Chọrọ ịmepe akaụntụ na mba ọzọ? Ntụziaka dị n'okpuru ebe a bụ nkuzi. Ọ na - enye ozi zuru oke maka ma ibido ma mee ka ihe ọmụma gị sikwuo ike.
Isi 1: Akaụntụ Banki: Kedu ihe ọ bụ? Gịnị Mere Nwere?
- Zuru ezu ozi, Atụmatụ na Olee otú si
Isi 2: The Ebumnuche kachasị mma nke 5 iji mepee Akaụntụ Oke - Na-agba ya ala
Isi 3:Ozi Banyere Mba Nile
Isi 4: Echiche Ụgha
Isi 5: Nchedo na Nche
Isi 6: Nchekwa akụ
Isi 7: Mba kacha mma na 6- Ndepụta Bank Bank nke Offshore
Isi 8: Mbido Akaụntụ Mpụga - Ihe a ga-eme
Isi 9: Akaụntụ Ndị Akaụntụ Kaadị Kaadị
Isi 10: akwụ ụgwọ
Isi 11: Nkwado ndị a na-atụ aro
Isi 12: Swiss Banking
Isi nke Daashi: Bitcoin na ndị ọzọ Cryptocurrency
Nsogbu Akaụntụ US
Ka anyị leba anya na United States banking system.
Wafọdụ n'ime ụzọ izizi akụ na US adịghị agbaso ụkpụrụ nchekwa nchekwa. Dịka ọmụmaatụ, Bank Bank of America Corporation nwetara ọkwa na nso nso a na ọ gafereghị nnwale ahụ. Nnwale ahụ kwubiri na ụlọ akụ ahụ dị ijeri $ 33.9 ijeri dollar nke na-enweghị ihe ha chọrọ iji kwado afọ abụọ nke nsogbu akụ na ụba.
Ọbụna ụlọ ọrụ ahụ nke ekwesịrị ịnweta mkpuchi ụlọ akụ US, FDIC n'onwe ya, dị mkpụmkpụ. Ha enweghi ego nke iwu chọrọ ka ọ nwee iji nweta amụma mkpuchi ụlọ akụ US.
Ọzọkwa, US Federal Reserve na-efegharị na ice. Akụ nke isi obodo ọ na - ejide bụ 1.24% dị oke mma. Chee echiche. Lehman Brothers nọ na 3% mgbe ọ gbara akwụkwọ maka itinye ego.
Na nyocha emere n'oge na-adịbeghị anya, enwere ụgwọ ijeri dọla $ 50.7 nke ezinụlọ, azụmaahịa na gọọmentị ji ụgwọ US. Nke a na - anọchi anya oge 3.5 dị ịtụnanya na ngụkọta ụlọ kwa afọ nke United States dum.
Banking System na Nsogbu
Ya mere o doro anya na US nwere usoro nchekwa akụ na-anaghị emebi emebi nke ndị ọrụ mkpuchi ego na-akwadoghị site n'aka ndị gọọmentị ụgwọ ụgwọ dị ukwuu, ndị na-akwado ndị na-akwụ ụgwọ kwụrụ ụgwọ kwụrụ ụgwọ. Ya mere, anyị ekwesịghị ịjụ, "kinglọ akụ ụsọ mmiri dị n'ụsọ adịghị mma?" Kama, anyị kwesịrị ịjụ, "kinglọ akụ US ọ dị nchebe?"
Anyị nwere ike ịhụ n'ụzọ ọzọ, na nke a abụghị ihe dị njọ. Ọ bụ eziokwu siri ike dabere na eziokwu mgbe ọ gasịrị. N'ezie, ọ bụ nchọpụta na-awụ akpata oyi n'ahụ nke na-anọdụ dị ka nkume na olulu nke afo.
Anyị hụrụ ndị mụrụ anyị ka ha na-aga n'ụlọ akụ, na-etinye ego ha dọgburu onwe ha n'ọrụ n'ụlọ akụ, ikwere na ụlọ akụ echedoro. N’ezie nsogbu adịghị, anyị nwere ike iche. Ọ bụ ụlọ akụ, ka emechara.
Agbanyeghị, na-elele ọnụ ọgụgụ dị na weebụsaịtị FDIC, site na 2000 ruo mmalite nke 2018, akụ ndị 555 US dara. Ee, 555. Buru n’uche na FDIC anaghị enye mkpuchi maka ndị na-edebe ego maka idobe akaụntụ ahụ. Naanị ha na-ekpuchi $ 250,000 mbụ. Ihe ọ bụla karịrị ego ahụ nwere ike ịbanye “ikuku” n'ime obere ikuku mgbe ụlọ akụ gị dara.
Cheta ọdachi ndị mebiri na Bank Banyere Banyere Ego? Nke a bụ nnukwu akụ akụ na ụba na US. Otu ụbọchị ndị na-edebe akwụkwọ chere na ihe niile dị mma. N'ụtụtụ echi ya, ha tetara ma chọpụta na akụ ha adịghịzi.
Ọ bụ otú a ka ọ dị taa. O nwere ike bụrụ ihe dị iche n'ihe ndị ekwere n'ime anyị bụ nwata. Mana anyị niile kwesịrị ịkpọte eziokwu ọhụrụ.
Eziokwu Ndị Na-ezighị ezi Na-eduga n'Ịntanet Banyere Banka
Mgbe anyị chere eziokwu ndị a pụtara ìhè, ọ na -eme ka anyị mata mkpebi ọhụrụ. Mgbe ndị isi ụlọ ọrụ ego bụ ndị nọ n'ụkọ, mgbe nkwenye eziokwu na-eme ka anyị mata eziokwu a. Don't echeghi na o bu ihe amamihe di na ya ijide opekata mpe nke ego gi na mba ofesi n'oge nsogbu karie?
M ga-eche n'echiche. M na-agba gị ume ime ihe iji debe akaụntụ mba ụwa ngwa ngwa o kwere omume. Jiri ya nọmba ekwentị or jupụta ụdị na ibe a. Anyị enyerela ọtụtụ puku mmadụ aka ka ha wee nweta akụ na ụba ha. Ọzọkwa, anyị na-enyere ndị mmadụ aka ichedo akụ ha ebe 1906 nọ.
Otu esi choputa ikike
Ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịtụle ikike n'ime ezigbo ego, yana gọọmentị udo na ụlọ ọrụ mmefu ego dịteworo aka. Ihe ndị mmadụ na ndị omebe iwu na-eme dị mkpa karịa ihe ha na-ekwu. Yabụ, ọ bụrụ na ha nwere aha ọma na nkwụsi ike ego, nke ahụ na-abụ nnukwu ụzọ ị ga-esi nweta ego gị.
Gịnị Bụ nke A n'Ezie?
Buru n'uche na ịchekwa ego gị n'èzí abụghị ihe ị ga-eme ka ị ghara ịzụta ụtụ isi na ụtụ isi dịka Cayman Islands ma ọ bụ Hong Kong. Ọ bụ ihe dị iche iche nke akụ. Na Dịka ọmụmaatụ, gọọmenti US anaghị elekọta gị ma ọ bụrụ na i nwere ego n'èzí ọ bụrụhaala na ị kọọrọ ego gị. Idebe ego n'èzí bụ, site na nnukwu, ihe nnọpụiche nke ụtụ isi. Ya mere, ọ naghị emekarị ụba ma ọ bụ belata ụtụ isi gị. Ọtụtụ nde ụmụ amaala nwere akwụkwọ ndị dị n'èzí ma ọ dịghị atụfu ọkọlọtọ ọkọlọtọ na ndị isi ụtụ isi ma ọ bụrụ na ị nwere otu.
Na ọbịbịa nke ụlọ akụ ntanetị, ike wiring n'ịntanetị, ụlọ akụ ekwentị na kaadị kredit, njiri akụ akụ abụghị ihe dị iche karịa ịkwụsịlata n'okporo ụzọ. Na mgbakwunye, ọ bụ ihe a na-ahụkarị bụ ịchọta ụlọ akụ na-enye ọmụrụ nwa dị elu, ọtụtụ mgbe dị elu, karịa ihe ndị ụlọ akụ mpaghara na-akwụ.
Chee echiche banyere it. Wgwọ ụgwọ na US dị elu ma e jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ. Rọnụahịa ala ala dị elu. Estụ ụtụ dị elu. Inshọransị ahụike ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ si n’elu ụlọ ahụ. Ego ndị ahụ na-ewere nnukwu ego nke uru nke ụlọ akụ na US, UK, Canada and mba ndị ọzọ nwere ọnụ ahịa dị elu. Ọ bụrụ na mmefu ụlọ akụ na-ebubata ntakịrị, a ga-afọdụ nke ukwuu ịkwụghachi gị, onye na-edebe ha.
Ihe mere US Banks na-ezochi Eziokwu
O doro anya na ụlọ akụ mpaghara gị agaghị eme mgbasa ozi TV na-agwa gị na ị nwere ike nweta ọtụtụ oke mma ọnụego oke osimiri. Bankslọ akụ ndị mba ọzọ, na-enweghị ikikere ụlọ akụ, enweghị ike kpọsaa ngwa ahịa na mpaghara. Yabụ kedu ihe ọzọ ị ga - ama? Ha agaghị agwa gị ihe ahụ ndị dị n’okpuru mmiri na-esi ike karị karịa akụ dara n'okporo ụzọ.
Ego kachasị mma n'èzí
Switzerland, Germany, Australia, Singapore, Hong Kong na ọtụtụ mba ndị ọzọ nwere nnukwu akụ echedoro echekwa. Nke gị nwere isi ọfụma, dabere na afọ iri nke ahụmahụ, nke centerslọ akụ nchekwa ego ga-emepe emepeepe maka ndị mba ọzọ, tinye ego ime mmụọ, na -agagide akụnụba, na-enwe ọrụ ga-adaba adaba, ma nwee obi ụtọ na ya na-arụ ọrụ.
Ọ bụ Ego gị - Nweta Enyemaka
Ọ dị oke mkpa ịnwe ntụzịaka nke onye nwere ahụmahụ ịhazi akụrụngwa na mpaghara. Banklọ akụ ọ bụla nwere ike ịme onwe ha ka ha maa mma. Ma ọ bụ naanị onye nwere ahụmahụ - Ma anyị edebewo puku kwuru puku akụrụngwa oke - nwere ike ịgwa gị ndị kacha emeso ndị na-edebe ego ha ihe ruuru ha. Ka emechara, anyị na-ekwu maka ego gị ebe a. N’ezie, ọ nwere ike na-eri obere. Ikekwe ị ga-enwe obere karịa ka ị chere. Mana ọ ka mma karịa usoro ọzọ na-emebi ihe nke ịhọrọ akụ na-ezighi ezi.
Atụmatụ Akaụntụ Akaụntụ Banyere mbupụ
Ndị na-enye ihe ndekọ ego na mba ofesi enweghị ike ikwuputa na ụgbọ mmiri iwu. Ọzọkwa, ụlọ akụ ụlọ bụ nnukwu ndị na-enye onyinye maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Yabụ, enwere njikọ nke enweghị ozi na ihe ọmụma na-ezighi ezi gbasara offshore akaụntụ. N'ihi ya, ụfọdụ ndị nwere echiche ụgha na ọ bụ iwu na-akwadoghị - ọ kachasị na ọ bụghị. Ụfọdụ na-eche na ọ bụ ụzọ isi zere ụtụ isi - ọ bụghị. Ụfọdụ na-eche na ndị omempụ na - eji ya eme ihe - nke a dị oke ntakịrị n'ihi na ụlọ akụ nwere ike ịkwụsị ikikere maka ịnakwere ihe ndị na - adịghị ọcha.
Eziokwu bụ, ọ bụrụ na ị si na US ma ọ bụ UKDịka ọmụmaatụ, na ọ bụrụhaala na ị na-akọ banyere ego gị zuru ụwa ọnụ, gọọmentị enweghị ike ilele obere Tulee na enwere ijeri dollar na efe efefere ala anyị kwa afọ. Ya mere, o nwere ike ịbụ na akaụntụ gị agaghị eme mpịakọta na radar gọọmentị etiti.
Kedu nhọrọ m?
E nwere ụfọdụ nhọrọ dị ịtụnanya dị maka onye na-achọ ihe ndekọ ego ụlọ ọrụ. Enwere offshore anoghi n'ulo oba na ipuiche nchebe ego si n'ụlọ ikpe. Bankslọ akụ ndị ọzọ na-ezuru ndị chọrọ akaụntụ azụmahịa azụmahịa dị elu. Ndị ọzọ ọkachamara na ego management maka ndi n’enye ego. Enwerekwa ụlọ akụ na-ebubata na mmiri obere ego na-ere ahịa n'ahịa maka ndi ahia. Fọdụ chọrọ nkwụnye ego dị obere, dịka $ 2000 US. Ndị ọzọ na-ejikọ ọnụ ahịa bara nnukwu uru ma chọọ nkwenye dị ukwuu, mgbe ha na-emeghe akaụntụ akụ, nke $ 250,000 US ma ọ bụ karịa.
Ụfọdụ na-akwụ ụgwọ ọnụ ọgụgụ dị elu karịa ụlọ akụ ụlọ, n'ihi ntakịrị ihe owuwu. Ndị ọzọ na-akwụ ọnụego ndị dị ka ahịa ahịa. Ụfọdụ iwu ndị dị n'èzí, dị ka Cook Islands, anaghị ama ikpe ikpe mba ọzọ. Ya mere, mgbe ha jikọtara ya na ntụkwasị obi dịpụrụ adịpụ, ha na-elekọta ndị na-achọ nchedo ego.
Mgbe ị na-ahazi ihe ndekọ ego mba ofesi, ịdị mkpa na ịmara-ụkpụrụ nke ndị ahịa gị bụ ihe zuru ụwa ọnụ. Usoro banki ndị ahụ na-enye ohere ị nweta ihe ndekọ akụ sitere na mba ofesi na-anabata ịnabata ndị ala ọzọ na-achọ ịnara ụtụ site na mba ha. Ha ga-enyocha ngwa gị iji hụ na isi mmalite ego gị bụ nke iwu. Ya mere, ọ bụrụ n’ịchọrọ imepe akaụntụ akụ nke mba ọzọ, dịrị njikere. Ha ga-achọ ka ị gosipụta njirimara gị nke ọma yana ebe nkwụnye ego gị si.
Banyere Banking Banking Site na Intanet
Bankslọ akụ niile chọrọ ka ịnye njirimara ziri ezi. Banksfọdụ ụlọ akụ ga-enye gị ohere iji akwụkwọ ozi zitere akwụkwọ. Ndi ozo choro ka i gosiputa onwe gi. N'ihi mmekọrịta anyị na ọtụtụ akụ n'ụwa niile, anyị bụ “onye ruru eru inweta”Ka anyị wee nwee ike akaụntụ maka ndị ahịa nọ ebe dị anya ebe ndị mmadụ enweghị ike iji aka ha mee ya. Ọzọkwa, imerime akụ dị n'ụsọ mmiri agaghị emepe akaụntụ maka US ma ọ bụ ndị Canada. Anyị maara ndị ga-emeghe ego maka ndị mba ọzọ, na enweghị mkpa njem. Jiri mpempe akwụkwọ a dị na peeji a ma ọ bụ nọmba dị n'elu iji nweta azịza ndị ọzọ maka ajụjụ gbasara azụsọ mmiri.